UMnyango Wokubhala, e-U.S.A.
Ukuze simemezele ‘izindaba ezinhle kuzo zonke izizwe nezinhlanga nezilimi nabantu’ ngendlela engcono kakhulu, sinyathelisa izincwadi ngezilimi ezingaphezu kuka-600. (IsAmbulo 14:6) Siwufeza kanjani lo msebenzi oyinselele? Siwufeza ngosizo lwababhali abasemazweni ahlukahlukene kanye nabahumushi abangaba ngu-3 000—bonke abangoFakazi BakaJehova.
Indaba iqale ibhalwe ngesiNgisi. INdikimba Ebusayo iqondisa umsebenzi owenziwa uMnyango Wokubhala endlunkulu yomhlaba wonke. Lo mnyango uhlela izabelo zababhali abakhonza endlunkulu nakwamanye amahhovisi amagatsha. Ukuba nababhali abavela ezindaweni ezihlukahlukene kusenza sikwazi ukubhala izihloko ezithinta abantu bamasiko ahlukahlukene ukuze izincwadi zethu zithakazelise kubo bonke abantu.
Okubhaliwe kuthunyelwa kubahumushi. Ngemva kokuba okubhaliwe kuhloliwe futhi kwatholakala ukuthi kuyafaneleka, kuthunyelwa nge-Internet emhlabeni wonke kubahumushi abakuhumushayo, bakuhlole bese bekufunda ukuze bakhiphe amaphutha. Bazama ukukhetha “amazwi eqiniso okuyiwonawona” azowuveza kahle ngolimi lwabo umqondo walokho okushiwo isiNgisi.—UmShumayeli 12:10.
Ama-computer enza umsebenzi usheshe. I-computer ayikwazi ukwenza umsebenzi wababhali nabahumushi. Noma kunjalo, izinto ezikuyi-computer njengezichazamazwi namathuluzi okucwaninga, zingenza umsebenzi usheshe. OFakazi BakaJehova basungula isimiso se-computer esibizwa ngokuthi i-Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS) esenza ukuba kubhalwe kuyi-computer ngezilimi eziningi, okubhaliwe kuhlanganiswe nezithombe bese kulungela ukunyatheliswa.
Kungani senza yonke le mizamo, ngisho nangezilimi ezikhulunywa abantu abayizinkulungwane ezimbalwa? Yingoba kuyintando kaJehova “ukuba zonke izinhlobo zabantu zisindiswe futhi zifinyelele olwazini olunembile lweqiniso.”—1 Thimothewu 2:3, 4.
Izincwadi zethu zibhalwa kanjani?
Kungani izincwadi zethu sizihumushela ezilimini eziningi kangaka?
Umculo Wezilimi Eziningi
Funda ngezinselele zokuhumusha amagama ezingoma ngezilimi eziningi.